Billboard Mockup | Hal-abuurka khadka tooska ah
Bal qiyaas in macmiilku yimaado oo uu ku weydiiyo inaad naqshadayso sawir matalaya shirkaddaada sababtoo ah waxa lagu xayaysiin doonaa boorarka xayaysiiska (haa, kuwa aan inta badan aragno marka aan wadno baabuur). Waxa aad u naqshadaysay inta uu le’eg yahay, waxa uu rabo oo marka aad u soo bandhigto uu dhaxan yahay. Ma garanaysaa sababta ay tahay? Sababtoo ah ma aadan isticmaalin xayeysiiska xayeysiiska ah, taas oo ah, waxaad siisay naqshadeynta laakiin ma aadan awoodin inaad aragto sida uu u ekaan lahaa boorka dhabta ah.
Y taasi waa waxa aan ku gaadhno mockups boodhadhka, sii xaqiiqada naqshadayntaada oo u hel macmiilka fikrad ah sida ay u ekaan doonto marka la dhigo xayndaabkaas. Laakiin sidee ku heli kartaa taas?
2 Waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso markaad samaynayso naqshadaynta boodhka
3 Halkee laga heli karaa boodhka majaajilada
3.2 Hoos ka daawo
3.3 boodhka wadada weyn
3.4 Jees-jeeska deyrka lagu dhisayo
3.5 Majaajilo ku habboon
3.6 Horudhac deyr dibadda ah
Hadda, waxaad u badan tahay inaad horeyba u haysatay fikrad ah waxa ka dhigan tahay jeesjees. Laakiin si loo caddeeyo, waxaan kuu sheegi doonaa inaan ka hadlayno matalaad sida ugu macquulsan ee suurtogalka ah ee ku saabsan naqshadeynta. Marka laga hadlayo mockup-ka boodhka, waxaanu kaga hadli jirnay sawirada boodhadhka xayaysiisyada, halkii xayaysiisyada caadiga ah, aanu qabsanaynay nashqada aanu u samaynay si uu macmiilku u ogaado sida uu u ekaan lahaa iyo fashilka ama khaladaadka suurtogalka ah ee ay tahay inay noqdaan. laga fogaado.. Tusaale ahaan, geedo daboolaya qaybo ka mid ah naqshadeynta, meelaha aan iftiinka lahayn, iwm.
Si uun, majaajilada ayaa naga caawiya inaan soo bandhigno naqshado leh itimaalka guusha weyn ee macmiilka (maxaa yeelay adigu ma siinayso naqshadda lafteeda, laakiin matalaad sida ay u ekaan doonto); Isla mar ahaantaana, waxay ka caawisaa naqshadeeyayaasha inay baabi'iyaan wax kasta oo dhibaato ah oo soo bixi kara (kuwa aan kuu sheegnay) iyo xitaa inay soo bandhigaan xulashooyinka caadiga ah iyo kuwa kale oo soo jiidan kara dareen badan.
Siinta xaqiiqada naqshadahan waxay ka socotaa shaashad ku dhawaad ​​​​nolosha dhabta ah, gaar ahaan haddii macaamiishu kuu sheegaan halka ay dhigayaan boodhka oo aad sawir ka qaadi karto.
Waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso markaad samaynayso naqshadaynta boodhka
In kasta oo naqshadaynta xayaysiisku ay tahay in dhammaan ay buuxiyaan baahiyo isku mid ah, taas oo ah in la xayaysiiyo badeecad, Marka laga hadlayo boodhadhka, sababtoo ah way ka weyn yihiin oo waxaa laga arki karaa meel fog, waa inaad aad uga taxadartaa faahfaahinta.
Dhab ahaantii, waa inaad dhigtaa meel muuqata oo ku filan (iyo halka indhaha kuwa arkaya ay tagi doonaan) si aad u soo jiidato dareenka. Haddii kale, wax badan ma tari doonto. Sidoo kale ma habboona in waxyaabo badan lagu dhejiyo naqshadeynta, sababtoo ah qofkaas dareenka ayaa lumi lahaa.
Ugu dambeyntii, cabbirka waa in la tixgeliyaa. Way fiicantahay in la muujiyo badeecada, weedha hal ama laba shay marka loo eego dhammaan laftiisa.
Halkee laga heli karaa boodhka majaajilada
Mar haddii aanu ognahay in aanad mar walba haysan karin sawirka boodhka ay ku xayaysiinayaan, waxba ma yeelayso in aad haysato dookhyo kale oo boodhadhka lagu majaajilo ah. ma tahay Waxay kaa caawin doonaan inay si joogto ah u siiyaan naqshadayntaada. Laakiin halkee laga helaa?
Waxaad haysataa laba ikhtiyaar: lacag la'aan, meesha xaddidaad badani jirto; iyo lacag, taas oo ku kici kara qiimo aad u jaban kuwa kale taas oo aan ku talin lahayn kaliya haddii aad dhab ahaantii leedahay macaamiisha noocan oo kale ah inta badan, sababtoo ah maalgelinta waxaa laga yaabaa in aan magdhow.
Halkan waxaan kaaga tagaynaa qaar ka mid ah kuwa aan u maleynay inay ku adeegi karaan.
Waxaan ku bilaabeynaa naqshad Waxay ina xasuusin doontaa boodhadhkaas xayaysiiska ah ee ka soo muuqda filimada isboortiga ee ay u muuqdaan kuwo waaweyn. Hagaag, wax la mid ah ayaa ah waxa aan rabno inaan ku dhacno, macmiilku si uu u arko naqshadiisa oo uu uga fikiro meesha uu dhigayo, sida ay u ekaan doonto.
Waad kala soo bixi kartaa bilaash Halkan.
Halkan waxaa ah majaajilo kale oo boodhadhka xayeysiiska ah oo aad ku heli karto fikrad sababtoo ah waxay sidoo kale ku siinaysaa cabbirada saxda ah ee boorkaas.
Mid baad leedahay hoos ka eeg, si fiican loo yidhi, dhexda ka eeg sababtoo ah hubaal waxay noqon doontaa mid aad uga sarreeya sawirka aad arki doonto.
boodhka wadada weyn
Haddii aad rabto in aad leedahay aragti ka duwan, iyo diiradda saar boodhadhkaas aad ku arkayso waddooyinka, markaas waa inaad isku daydaa middaan ku siinaysa aragti kale.
waa kuu diyaar aquí.
Jees-jeeska deyrka lagu dhisayo
Magaalooyin badan, gaar ahaan kuwa waaweyn, waxay leeyihiin dhismayaal ay kireysteen si ay boorar ugu dhejiyaan si ay meel fog uga soo jeedsadaan (sida caadiga ah dhismayaasha ku wajahan waddooyinka waaweyn, jidadka waaweyn, iwm.) iyo dabcan, tusaale ahaan taasi waa jees-jeeskan.
Majaajilo ku habboon
Maxaa dhacaya haddii ay ku weydiiyaan naqshadeynta laba shiraac? Taasi waa in la yidhaahdo, laba boodh oo is dhex gala (Tusaale ahaan, in mid ka mid ah ay jirto su'aal iyo mid kale jawaab. Hagaag, waxaad sidoo kale tusi kartaa iyaga, sidoo kale isla sawirka.
Waa kuwo la beddeli karo oo waxaad wax ka beddeli kartaa set si aad ula qabsato waxa aad rabto inaad u soo bandhigto macmiilkaaga.
Horudhac deyr dibadda ah
Tusaale kale oo aad u isticmaali karto si aad u tusto macaamiisha waa majaajilada deyrka. Isaga waxaad siin kartaa aragti kale oo ka duwan.
Munaasabadan kuma talineyno mid, laakiin xulashada iyaga tan iyo markii aan la kulannay Pinterest oo leh ururinta boodhadhka nashqadaha kala duwan si aad u hesho midka aad jeceshahay.
Qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa iska leh maqaallada oo waad la socon kartaa si aad u soo dejiso faylasha gaarka ah.
Halkan waxaan kaaga tagaynaa adiga isku xirka oo aanu ogaanay.
Haddii aad wax yar ka daalacanto intarneedka waxaad heli kartaa tusaalooyin kale oo badan waana agab ku imaan kara. Sidaa darteed haddii aad tahay naqshadeeye ama aad la kulanto mashruucan marmar, waxay ku imaan doonaan waxtar marka ay timaado muujinta naqshadeynta macmiilka, siinaya taabashada dhabta ah. Ma garanaysaa wax dheeraad ah oo aad ku taliso?
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Billboard Mockup